Torres oo laga yaabo in kulanka Juventus laga doorto Sturridge. - Caasimada Online
Home Warar Torres oo laga yaabo in kulanka Juventus laga doorto Sturridge.
Torres oo laga yaabo in kulanka Juventus laga doorto Sturridge.
Tababaraha Chelsea Roberto Di Matteo ayaa doonaya inuu go’aansado weeraryahankii uu kusoo bilaabi lahaa kulanka ay kooxdiisu caawa wajaheyso Juventus.
Kooxda Di Matteo ayaa hada keliya hal kulan guul gaartay afartoodii kulan ee ugu dambeeyey waxaana la ogyahay guul darro kasoo gaarta Turin inay sii adkeyneyso in kooxda heysata koobaakan ay sii difaacato.
Chelsea ayaa noqon doonta kooxdii ugu horeysay ee Champions League ku guuleysta misna ku harta wareega Group, waase hadii ay dhacdo in lagu raabo, Di Matteo ayaana doonaya inuu isbedel muuqda ku sameeyo kooxdii ay guul darradu kasoo gaartay West Bromwich Albion, waxaana taas loo micneeyey in Fernando Torres Keydka la cabsiiyo markiisii ugu horeysay xilli ciyaareedkaan.
“Had iyo jeer waan sheegayey inaan laba weeraryahan ku heysano kooxda, Fernando iyo Daniel Sturridge,” ayuu qirtay Di Matteo.
“Labadoodu wey caafimaad qabaan waan arki doonaa sida ay noqoto. Waxaan sameyn doonaa wax walba oo aan rumeysanahay inay yihiin waxa u fiican kulanka.”